थर्मल पेस्ट: यो के हो, प्रकार, यो कसरी प्रयोग गरिन्छ ... | नि: शुल्क हार्डवेयर
इसहाक | 15/11/2021 11:38 | इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्टहरू
La थर्मल पेस्ट व्यापक रूपमा प्रयोग हुने पदार्थ हो इलेक्ट्रोनिक्स को संसार। सामान्यतया उच्च प्रदर्शन प्रशोधन चिप्स र heatsinks बीच गर्मी अपव्यय सुधार गर्न एक इन्टरफेस रूपमा। तर यो एक मात्र ठाउँ होइन जहाँ यो प्रयोग गरिन्छ, यो उच्च शक्ति ट्रान्जिस्टरको लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ पेल्टियर प्रभाव प्लेटहरू, आदि
यस लेखमा तपाईले थाहा पाउनुहुनेछ यो पदार्थ वास्तवमा के हो, यसको प्रकार्य, यो कसरी ठीकसँग लागू हुन्छ, बजारमा अवस्थित प्रकारहरू र तपाईंले किन्न सक्ने उत्तम ब्रान्डहरू।
1 थर्मल पेस्ट के हो?
3 थर्मल ग्रीसका प्रकारहरू
4 के उत्पादन किन्न?
थर्मल पेस्ट के हो?
यसलाई धेरै तरिकामा बोलाउन सकिन्छ: थर्मल पेस्ट, थर्मल सिलिकॉन, थर्मल ग्रीस, आदि यी सबै सर्तहरू पर्यायवाची हुन्, र तिनीहरू बीच कुनै भिन्नता छैन। दुई सतहहरू बीचको इन्टरफेस हुँदा तापलाई राम्रोसँग नष्ट गर्न मद्दत गर्नको लागि राम्रो थर्मल चालकता गुणहरू भएको पदार्थलाई जनाउँछ। उदाहरण को लागी, जब एक हीटसिंक एक चिप मा प्रयोग गरिन्छ, एक सतह र अर्को बीच हुन सक्ने "अन्तर" भर्न र यसरी प्रवाह अधिक कुशल बनाउन।
थर्मल पेस्टमा विभिन्न तत्वहरू छन् रचना:
Polymerizable तरल म्याट्रिक्स: यो पेस्टको आधार हो, जसले यसलाई तरल पदार्थ बनाउँछ। सामान्यतया, यी प्रकारका जेलहरू वा पेस्टहरू सामान्यतया सिलिकनहरूमा आधारित हुन्छन् (त्यसैले तिनीहरूको नाम), इपोक्सी रेजिन, एक्रिलेट्स, यूरेथेनहरू, इत्यादि, र तिनीहरूलाई टाँस्ने रूपमा सट्टा टाँस्ने वा प्याडहरूमा व्यवस्थित गर्न सकिन्छ।
कणहरू: यी फिलरहरूले सामान्यतया थर्मल पेस्टको संरचनाको 70 र 80% बीच प्रतिनिधित्व गर्दछ। यस अवस्थामा, तिनीहरू धेरै विविध हुन सक्छन्, जस्तै तामा, एल्युमिनियम, चाँदी, जिंक अक्साइड, बोरोन नाइट्राइड, आदि।
यो सबै संरचना को कारण, यो थर्मल पेस्ट हुन सक्छ यदि निल्यो भने विषाक्त। तसर्थ, यसलाई प्रयोग गर्दा सावधानीहरू अपनाउनु पर्छ, पञ्जा बिना ह्यान्डल गरिएको छ भने हात धुनुहोस् र यसलाई बालबालिकाको पहुँचमा नछोड्नुहोस्। थप रूपमा, यसले छाला, आँखा र श्लेष्म झिल्लीहरूमा पनि जलन दिन्छ, त्यसैले तपाईंले यसलाई ह्यान्डल गर्दा सुरक्षा तत्वहरू प्रयोग गर्नुपर्छ। केही भिडियो ट्यूटोरियलहरूले देखाउँछन् कि उनीहरूले यसलाई हातले पनि कसरी लागू गर्छन्, तर यो गर्नु हुँदैन।
यदि तपाइँ नयाँ इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्टको अगाडि हुनुहुन्छ, र तपाइँ यसको सतहमा थर्मल पेस्ट प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ वा कुन प्रयोग गर्ने भनेर तपाइँ निश्चित हुनुहुन्न भने, म तपाइँलाई सधैं पढ्न सिफारिस गर्दछु। निर्माता डाटाशीट। यस कागजातमा तपाईले यसको बारेमा जानकारी पाउनुहुनेछ, अपव्यय आवश्यकताहरू, शक्ति, अधिकतम र न्यूनतम तापमान समर्थित, मानहरू जस्तै जंक्शन-केस, जंक्शन-एयर, आदि।
थर्मल पेस्ट मात्र छैन गुणहरू थर्मल चालकता को, तर अन्य पनि, र यो तिनीहरूलाई विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ, किनभने तिनीहरूले प्रयोग सर्त गर्न सक्छन् जसको अनुसार इलेक्ट्रोनिक तत्वहरू। यो पदार्थ मुख्य रूपमा विशेषता छ:
थर्मल चालकता: यो थर्मल पेस्टमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारक हो, किनकि यो एक पदार्थ हो जसको उद्देश्य गर्मी फैलाउनु हो। तसर्थ, तिनीहरूसँग गर्मी सञ्चालन गर्न राम्रो क्षमता हुनुपर्छ। यो कारक मापन गर्न वाट प्रति मिटर-केल्भिन जस्ता एकाइहरू प्रयोग गरिन्छ। पास्ता वा ब्रान्ड को प्रकार मा निर्भर गर्दछ, यो चालकता धेरै फरक हुन सक्छ। उदाहरणका लागि, तामा, चाँदी, हीरा वा एल्युमिनियममा यस सन्दर्भमा धेरै राम्रो गुणहरू छन्, अन्य जस्ता जस्ता अक्साइड, एल्युमिनियम नाइट्राइड, आदि, त्यति धेरै छैन।
विद्युत चालकता: यो थर्मल पेस्टले निम्त्याउन सक्ने समस्याहरू मध्ये एकसँग सम्बन्धित छ यदि यसले बिजुली राम्रोसँग सञ्चालन गर्दछ। सामान्यतया, पास्ता उत्पादकहरूले आफ्नो उत्पादनले प्रस्तुत गरेको विद्युतीय प्रतिरोध देखाउने प्रवृत्ति हुन्छ। उच्च (ओम प्रति सेन्टिमिटर), राम्रो इन्सुलेटर हुनेछ, त्यसैले यो धेरै राम्रो हुन सक्छ। यदि पेस्टको प्रतिरोधात्मक क्षमता कम छ र राम्रोसँग चल्छ भने यसले केही ट्र्याक वा पिनहरूसँग सम्पर्कमा आउँदा सर्ट सर्किट समस्या निम्त्याउन सक्छ।
थर्मिक विस्तार गुणांक: ध्यान दिनुपर्ने अर्को एकाइ हो। यस अवस्थामा, तपाईंले टाँस्न खोज्नु पर्छ जसको गुणांक सबैभन्दा कम सम्भव छ, त्यो हो, ताकि यो तातो संग सकेसम्म थोरै विस्तार हुन्छ। अन्यथा, यसले घटकहरू बीच तनाव समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ।
थर्मल ग्रीसका प्रकारहरू
बजारमा थर्मल पेस्टका धेरै प्रकारहरू छन्, र प्रत्येक मामिलामा कुन छनौट गर्ने भनेर सबै उपलब्ध समाधानहरू बीच छुट्याउन महत्त्वपूर्ण छ, किनकि तिनीहरू सबैसँग छन्। फाइदाहरू र हानिहरू:
तताउने प्याड: यो एक टाँस्ने वा प्याड हो जसले ताप प्रवाहक इन्टरफेसको रूपमा काम गर्दछ र यसको उद्देश्य थर्मल पेस्ट जस्तै हो, तर यसलाई अझ सजिलैसँग प्रयोग गर्न सकिन्छ, र यसले मात्रा नियन्त्रण गर्न समावेश गर्दैन, यो एकरूपता विस्तार हुन्छ, आदि। किनकी यो केवल कम्पोनेन्टको सतहमा टाँसिन्छ वा तातो सिङ्कमा। तिनीहरू छुट्टाछुट्टै बेचिन्छन्, यद्यपि तिनीहरू सामान्यतया केही रेफ्रिजरेसन प्रणालीहरूमा पूर्व-स्थापित हुन्छन् विधानसभाको सुविधाको लागि। यी सामान्यतया सिलिकन वा प्याराफिन मोमले ठोस प्रवाहकीय कणहरूसँग मिसाइएका हुन्छन्। कोठाको तापक्रममा तिनीहरू थप ठोस देखिन्छन्, तर जब तिनीहरू काम गरिरहेका छन्, तिनीहरू थप तरल हुन्छन्।
थर्मल पेस्ट: चिपचिपा तरल पदार्थ हो जुन सजिलै प्रयोग गर्नको लागि एप्लिकेसन ब्रश, ट्युब वा सिरिन्जको साथ क्यानमा बेचिन्छ। यो पेस्ट भित्र तपाईले निम्न प्रकारहरू पाउन सक्नुहुन्छ:
धातुको: तिनीहरू भर्नका लागि धातुका कणहरू (जस्ता, तामा, एल्युमिनियम, चाँदी, सुन ...) प्रयोग गर्छन्, र तिनीहरूको सामान्यतया खैरो रङ हुन्छ। तिनीहरू धेरै लोकप्रिय छन्, र तिनीहरू धेरै महँगो छैनन्। तिनीहरू थर्मल चालकताको सन्दर्भमा धेरै राम्रो व्यवहार गर्छन्, केहि अवस्थामा 6ºC सम्म तापमान कम गर्न सक्षम छन्। यद्यपि, तिनीहरूसँग समस्या छ, र यो तिनीहरूको विद्युतीय चालकता हो। धातु कणहरूको साथ, यदि त्यहाँ चुहावट छ भने यसले सम्पर्कहरू बीच सर्ट-सर्किट हुन सक्छ।
सिरेमिक्स: फिलर कणहरू सिरेमिक हुन् (जिंक अक्साइड, सिलिकन डाइअक्साइड, एल्युमिनियम अक्साइड, ...), हल्का खैरो वा सेतो रंगहरू। यी थर्मल सिलिकनहरूको बलियो बिन्दु यो हो कि तिनीहरू धेरै सस्तो छन् र कम विद्युतीय चालकता छ, त्यसैले तिनीहरू चुहावटको अवस्थामा सुरक्षित छन्। यद्यपि, तिनीहरूको थर्मल चालकता खराब छ, त्यसैले तिनीहरूले यसलाई प्रयोग नगर्ने इन्टरफेसको तुलनामा तापमान 1 देखि 3ºC कम गर्न मात्र मद्दत गर्नेछ।
कार्बन: तिनीहरू अधिक महँगो र नयाँ छन्, तर तिनीहरूले राम्रो परिणामहरू प्रस्ताव गर्छन्। तिनीहरू सामान्यतया प्रणालीहरूका लागि अभिप्रेरित हुन्छन् जसलाई बढी गर्मी अपव्यय चाहिन्छ, जस्तै ओभरक्लोक चिप्स, उच्च-प्रदर्शन वा उच्च-शक्ति उपकरणहरू, इत्यादि। तिनीहरू हीराको धुलो, ग्राफिन अक्साइड, आदि जस्ता कणहरूमा आधारित हुन्छन्। यस अवस्थामा, गुणहरू लगभग पूर्ण छन्, किनकि एकातिर तिनीहरूसँग धातुको जस्तै धेरै राम्रो थर्मल चालकता छ, र अर्कोमा तिनीहरूसँग सिरेमिकहरू जस्तै धेरै कम विद्युतीय चालकता छ।
तरल धातु: तिनीहरू त्यति सामान्य होइनन्, तर प्रायः केही निर्माताहरू वा उत्साहीहरूले प्रशोधन इकाइहरू आदिको हेटसिङ्क ब्लकहरूको लागि प्रयोग गर्छन्। यद्यपि तिनीहरूसँग राम्रो अपव्यय गुणहरू छन्, धातुमा आधारित ती भन्दा केही हदसम्म राम्रो पनि, यो अन्य प्रकार सामान्यतया महँगो हुन्छ र एल्युमिनियम तापसिङ्कहरूसँग प्रतिक्रिया गर्न सक्छ, किनकि तिनीहरूले इन्डियम वा ग्यालियम जस्ता धातुहरू प्रयोग गर्छन्।
संकर: त्यहाँ केही हाइब्रिड थर्मल पेस्टहरू पनि छन्, त्यो हो, तिनीहरू गुणहरू सुधार गर्न आधारको रूपमा विभिन्न फिलर कम्पोनेन्टहरू मिलाउँछन्।
के उत्पादन किन्न?
यदि तपाइँ थर्मल पेस्ट उत्पादन किन्न चाहनुहुन्छ भने, यहाँ केहि छन् सबै भन्दा राम्रो ब्रान्ड र विकल्पहरू तपाईले बजारमा पाउनुहुनेछ:
थर्मल प्याड वा प्याड: ADWITS
हाइब्रिड थर्मल पेस्ट: Noctua NT-H1
सिरेमिक: कुनै उत्पादनहरू फेला परेनन्।
धातुको: आर्टिक चाँदी 5
कार्बन आधारित: कूलर मास्टर मास्टरजेल निर्माता
लेखको पूर्ण मार्ग: नि: शुल्क हार्डवेयर » इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्टहरू » थर्मल पेस्ट: यो के हो, प्रकार, यो कसरी प्रयोग गरिन्छ ...
Raspberry Pi Zero 2W: Raspberry Pi बाट सबैभन्दा नयाँ